You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Others / Q&A : BELL'S PALSY ( ဘယ်ဘက်ခြမ်း )
အမေး အဖြေ ကဏ္ဍ ———-
ဆရာမကြီးရှင့် ကျမ အသက် ၃၇ နစ်ရှိပါပြီ စင်ကာပူ မှာ ————-အနေနဲ့ အလုပ်
လုပ် ပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ ပတ်လောက်က BELL'S PALSY ( ဘယ်ဘက်ခြမ်း ) ဖြစ်လို့ ဆေးရုံတက်ရပါတယ် ဆရာဝန်က ဒီဆေး ဒီ amount တိုက်ပါတယ်
ACYclovir 200 mg5timesaday for77days
Prednisolone5mg ,
-6 pills at morning for5days
-4 pills at morning for4days
-2 pills at morning for5days
sodium chloloride 0.9% for7days (both eyes)
အဲဒီနောက်မှာ ကျမ ညာဖက်မျက်လုံးကတော်တော် Dry ဖြစ်နေလို့မျက်စိဆရာဝန်နဲ့
ထပ်လွှဲပေးပါတယ် BELL'S PALSY ဖြစ်ပြီး ၂ ပတ်အကြာပါ ဆရာဝန်က Dry Eye, BELL'S PALSY နဲ့မဆိုင်ဆိုပြီး ဒီဆေး ဒီ amount တိုက်ပါတယ်
wild salmon and fish oils 1000 mg (EPA 180 mg, DHA 120 mg) twiceaday
refresh plus every3hours(both eyes)
BELL'S PALSY ဖြစ်ပြီး ၆ ပတ်ကြာတဲ့အချိန် ထိ မျက်လုံးကကောင်းလိုက် ပြန် ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ တခြားဆရာဝန်နဲ့ပြပါတယ် ကျမအာမခံ claim လို့မရနိုင်လို့ပါ
သူကတော့ မျက်လုံးကယောင်နေသေးတယ် BELL'S PALSY ရဲ့ Virus မျက်လုံးထဲမှာကျန်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ် သေချာအောင် aqueous chamber tap လုပ်ပြီး Virus ရှာမလားမေးပါတယ် ကျမ လဲ aqueous chamber tap နာမှာဆိုးလို့ မလုပ်ချင်ပါ ဆိုတော့အယောင်ကျအောင် ဆေးပေးပါတယ် ကျမ က side effect မေးတော့ prednisolone 1% မို့အရမ်းနဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင့်
(eye drop)(both eyes)
-4timesaday for7days
-3timesaday for7days
-2timesaday for 14 days
prednisolone acetate 1% ၂၈ ရက်ပြည့်လို့ရပ်ပြီး ၂ ရက်အကြာမှာ ဘယ်မျက်လုံး ဝါး ပြီး Flash တွေမြင်ရပါတယ် ဘယ်ဘက် နားသယ်စပ်ကစပြီး အကြောတွေတင်းပါတယ် ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းတဖက်ကအိပ်တိုင်းပိတ်ပါတယ် ၄ ရက်မြောက်မှာ ကျမ အဲဆရာဝန်ဆီပြန်သွားပါတယ်
Ocular hypertension ရှိတယ် 36 mmHg ရှိတယ် မျက်လုံးကယောင်နေသေးတယ်
ပြောပါတယ် ကျမ ကို aqueous chamber tap လုပ်ဖို့ထပ်တိုက်တွန်းပါတယ် ကျမ လဲ ဖြစ်နေတာတွေကို မြန် မြန်ပျောက်ချင်တာရော Virus ကိစ္စကိုသိချင်တာရောကြောင့် လုပ်ခဲဲ့ပါတယ် ပြီးတော့ ဆရာဝန် က aqueous chamber tap ကOcular hypertension ကိုကောင်းကျိုးရှိတယ်ပြောပါတယ်
(eye drop) (left eye)
-levofloxacin Hydrate 0.5%4timesaday for7day
-ketorolac tromethamine 0.5%4timesaday for7day
-brimonidine tartrate 0.15%3timesaday for7day
ဒီနေ့ ၄ ရက်ရှိပါပြီ မျက်လုံးက Flash တော့မမြင်ရတော့ပါဘူး ဝါးတာတော့ကျန်ပါသေးတယ် နဲနဲလဲအောင့်နေပါသေးတယ် ဘယ်ဘက် နားသယ်စပ် တင်းတာ နဲ့ ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းပိတ်တာ ကတော့ ပြောက်လိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက်ပါပဲရှင့်
ကျမ သူငယ်ချင်းက ပြောလို့ ဆရာမကြီးစာတွေဖတ် ကြည့်မှ steriod ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေ
ပိုမြင်လာတာပါ အခုတော့တော် တော်လေးစိတ်ညစ်နေပါတယ်ရှင် prednisolone acetate 1% က Ocular hypertension side effect ရှိတာကိုတွေ့လို့ပါ ကျမ ၂၈ ရက်တောင်သုံးခဲ့မိတယ် တဆက်ထဲ aqueous chamber tap လုပ်မိတာကိုလဲနောင်တရမိ တယ် ဘာတွေများထပ်ဖြစ်ဦးမလဲ ဆိုပြီး အဲ ဆရာဝန်ကို ယုံတောင်မ ယုံရဲတော့ဘူး
ကျမ မှာ Dry Eye စဖြစ်တဲ့ညာဖက် က ဘာမှမဖြစ်ပဲ ဘယ်မျက်လုံး မှာပဲ ဟိုတွေ့ဒီတွေ့ဆိုတော့ ဆရာမကြီး ကျမကိုအကြံညဏ်ပေးပါဦးရှင့် prednisolone acetate 1% ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ ဘယ်လိုလျှော့ရမလဲလို့ပါ ကျမဘာဆက်လုပ်ရမလဲကို မသိတော့လို့ပါ အရမ်းကြောက်ပြီးအိပ်လို့တောင်မပျော်ပါဘူး ကျမ လော လောဆယ်ဒါတွေတော့ဆက်သောက်/သုံးနေပါတယ်
ဘရိုကိုလီနဲ့ ဟင်းနုနယ်ရွက် ကိုတော့အမြဲတမ်းစားဖြစ်ပါတယ် မုံလာ ဥနီ ၁ ရက် ၁ လုံး စားဖြစ်ပါတယ် (Juice မဟုတ်ပါ တလုံးလုံးစားတာပါ) ကဇွန်းဥ ကိုလဲ မျက်လုံးစဖြစ် ကထဲကစားဖြစ်ပါတယ် အလုပ်အရလဲမျက်လုံးကအရမ်းအရေးကြီးလို့ပါ ရှင့် အ ရိုးပြုတ်ရည်တော့စသောက်နေပါပြီရှင့်
Diabetes/D3 နဲ့ Thyoid ကတော့စစ်ပြီး အဖြေစောင့်နေဆဲပါ ရှင့်
Bell’s palsy ဆိုု တာ မျက်နှာ နာကြော ရုုပ် ချည်း ခေတ္တ သေ သွား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
များ သော အား ဖြင့် က တော့ မျက်နှာ တစ် ဖက် တည်း မှာ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
ခံစား ရ တာ တွေ ဟာ တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် ပမာဏ အား ဖြင့် မတူ တတ် ကြ ပါ။
လက္ခဏာ တွေ က တော့ ———
မျက်နှာ ကြွက်သား လှုပ် မေန တတ် တယ်။ twitching
ကြွက်သား အား မရှိ ဖြစ် တတ် တယ် weakness
လေဖြတ် သ လိုု လှုပ် လိုု့ မရ တော့ Paralysis
မျက်ခွံ ၊ ပါးစပ် ထောင့် တွဲ ကျ နေ တတ် တယ် drooping eyelid or corner of mouth
သားရေ ကျ တတ် ခြင်း drooling
မျက်ရေ အထွက် လွန် ခြင်း. excessive tearing in the eye
စား ရင် အရသာ မ တွေ့ ခြင်း impaired ability to taste
ဆေးကုု သည် ဖြစ် စေ၊ မကုု သည် ဖြစ် စေ၊ များ သော အား ဖြင့် နှစ်ပတ် အတွင်း တ ဖြေးဖြေး ပြန် ကောင်း လာ တတ် ပါ တယ်။
သုုံး လ ၊ ခြောက် လ လောက် ကြရင် တော့ များ သော အား ဖြင့် လုုံးဝ ပြန် ကောင်း သွား တတ် ပါ တယ်။
ဆေး ပညာရှင် တွေ ထင် တာ က တော့ ဒီ ရောဂါ ဟာ virus ပိုု ကြောင့် လိုု့ ထင် ကြ ပါ တယ်။
အထူး သဖြင့် Herpes virus ပိုုး ပေါ့။
ဒါ ကြောင့် လဲ လူ နာ ကိုု herpes အတွက် ဆေး ရယ်၊ အယောင်ကျ အောင် Prednisolone ( steroids ) တွေ ပေး တာ ဖြစ် ပြီး၊ မျက်စိ မ ခြောက် ရ အောင် မျက်စဉ်း ခပ် ခိုုင် တာ လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျွန်မ အနေ နဲ့ ဝေဖန် ကြည့် ချင် ပါ တယ်။
ကုုရိုုးကုုစဉ် က တော့ ဟုုတ် ပါ တယ်။ အရေး ပေါ် အချိန် မှာ ဆိုု လိုု ပါ တယ်။
အထူးသဖြင့် အယောင်ကျ အောင်၊ ပိုုး ကိုု နှိမ် နှင်း ရ အောင် စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒါ တွေ အား လုုံး ဟာ လည်း ဖြစ် လာ တဲံ ရောဂါ ရဲ့ အကျိုး တွေ ကိုု သာ လိုုက် ကုု နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
ဖြစ် နေ တဲ့ အချိန် မှာ လိုု ပါ တယ်။
အစ က တည်း က ဒီ လိုု မဖြစ် လာ ရ အောင် နေ ဖိုု့ လိုု ပါ တယ်။
နောက် တစ် မျိုး ရျင်း ပြ ရ မယ် ဆိုု ရင် ခန္ဓာကိုုယ် ခုုခံ အား ကောင်း နေ ရ အောင် နေ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ခုုခံ အား ကောင်း နေ ရင် တော်ရုုံ ပိုုး ဟာ ထ ကြွ သောင်း ကျန်း ခြင်း မရှိ ပါ။
သောင်း ကျန်း ရင် လဲ ခဏ ပါ ပဲ။
ကျွန်မ တိုု့ တ တွေ အား လုုံး ခုုခံ အား တွေ မ ကောင်း ကြ တဲ့ လူ တွေ များ ပါ တယ်။
အရေး အကြီး ဆုုံး က တော့ ကျွန်မ ပြော နေ ကြ ဖြစ် တဲ့ thyroid hormone အားနည်း ခြင်း နဲ့ Vitamin D3 အား နည်း နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျွန်မ သာ လူ နာ ဆိုု ရင် အောက် ပါ အတိုုင်း လုုပ် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
D3 10,000 IU daily
SuperK one daily
Check body temperature . If below 97.8 thyroid glandular ( American Biologics ) onceaday
Methylcobalamin B12. 5000 microgramaday
Acetyl L Carnitine 1000mgaday
Cod liver oil wit DHA 500mg and EPA 400mg 1 -2 tspaday
Zinc 50 mgaday
L Lysine 620mg from Life Extension once or twiceaday
သဘာဝ ဆေး တွေ က ဥပါဒ် မရှိ တာ ကြောင့် စမ်း ကြည့် မယ် ဆိုု ရင် အရှုံး မရှိ နိုုင် ပါ။
အမြတ် သာ ထွက် လိမ့် မည် ထင် ပါ တယ်။
ကျန်မာ ၊ချမ်း သာ ပါ စေ.
ရောဂါ အမြန်ဆုုံး ပျောက် ပြီး သက် သာ လာ ပါ စေ။